အဘိဥာဏ်ဖတ် - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > အဘိဥာဏ်ဖတ်
ကင်ဆာအကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း5/ 27 /7@ 11 အတွက် universal အားလုံးလက္ခဏာတွေမွန်း: Tarot ဘုရင်မကြီး Jamila / w 24am
Megan မေလ 28, 2017aComment ချန်ထား Tarot ဘုရင်မကြီး Jamila / w 5am: ကင်ဆာအကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း 27 /7/ 11 @ 24 အတွက် Universal အားလုံးလက္ခဏာတွေမွန်းပေါ်
ကြှနျတေျာ့ကို PayPal ကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေရန် http://tarotqueenjamila.thedivinemommy.com/: ငါ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာစာဖတ်သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရန်: [အီးမေးလျ protected] အီးမေးလ်ပို့ရန်မေးခွန်းများ: [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ် (770) 686-7461 **************** လက်ရှိ Specials မခေါ် !!! ********************* [ ... ] များအတွက် $ 20 ********
ကင်ဆာ5/ 24 /5မှ 31 / 2017 များအတွက် Gemini အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းခုနှစ်တွင် "လမ်းဆုံ" ဟု New Moon
Megan မေလ 27, 2017 1 မှတ်ချက် ကင်ဆာအပေါ်5/ 24 များအတွက် Gemini အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းခုနှစ်တွင် "လမ်းဆုံ" ဟု New Moon5/ 31 / 2017 မှ
အားလုံးအကြားအမြင် Read 50-8 မေလ၏ 15%: တောင်းဆိုထားသောဒါကသူများသည်များအတွက်
Megan မေလ 8, 20173မှတ်ချက် အားလုံးအကြားအမြင် Read 503-8 ၏ 15 မေလတွင်: တောင်းဆိုထားသောဒါကသူများသည်များအတွက်အပေါ်
တစ်ဦးတည်းသာတစ်ပတ်! အမေဇုံမှာအကြှနျုပျ၏ eBook www.andulairah.com မှာ Clairvoyant / အကြားအမြင်ရ / ဘဝကနည်းပြဖတ်စာအုပ်: https: //www.amazon.com/Eyes-Scarlet-R... ဂီတ & ပဲ့ထိန်းဆင်ခြင် !: http: //www.cdbaby .com / အနုပညာရှင် / andulairah ဘဝကနည်းပြမှာ: [ ... ]: မှာစာအုပ်၏ Edition ကိုမရရှိနိုင် http://www.andulairah.com/shop-front collector
Libra အတွက်လက်ရှိမွန်းမေလ 9th, 2017 များအတွက် Scorpio အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းခြင်း
Megan မေလ 7, 2017aComment ချန်ထား လက်ရှိမွန်းအပေါ် Libra အတွက်မေလ 9th, 2017 များအတွက် Scorpio အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းခြင်း
လီယိုမေ, 2017..Tarot Card ကိုစာဖတ်ခြင်း, အကြားအမြင်ရအလတ်စား
Megan မေလ 7, 20174မှတ်ချက် လီယိုမေ, 2017..Tarot Card ကိုစာဖတ်ခြင်း, အကြားအမြင်ရအလတ်စားအပေါ်
"၎င်း၏လက်ဖက်ရည်ချိန် TIME '' သင်လီယိုဇူလိုင်လ 23 စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်မည်သူမဆိုကျေးဇူးတင်ပါသည် - လဖတ်နေသြဂုတ်လ 22 Clairvoyance နှင့် Tarot ကဒ် [ ... ] Beverly: D နဲ့အတူဖတ်သင့်ရဲ့ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဆွဲ MAY2017
အကြားအမြင်စာဖတ်ခြင်း - အကြားအမြင်လိမ်လည်မှုရှောင်ရှားသင်၏လမ်းညွှန်
Megan မေလ 6, 2017aComment ချန်ထား အကြားအမြင်ရလိမ်လည်မှုရှောင်ရှားသင်၏လမ်းညွှန် - အကြားအမြင် Read အပေါ်
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုမကြာခင်မှာပဲလာသေး၏ - အကြားအမြင်စာဖတ်ခြင်း - ခက်ခဲကြိမ်မှာတော့အကြားအမြင်လိမ်လည်မှုရှောင်ရှားသင်၏လမ်းညွှန်လူအတော်များများ clairvoyants, အကြားအမြင်ရ, ကံဇာတာ Teller နှင့်ထံမှအချက်အလက်များနှင့်အကြံပေးချက်ကိုရှာခြင်းငှါ [ ... ]
$$$ 5-4-17 များအတွက်အကြားအမြင်ရငွေခန့်မှန်းချက်ကမ္ဘာမြေလက္ခဏာများ (Taurus, Virgo, Capricorn) 5-11-17 မှ
Megan မေလ 5, 2017aComment ချန်ထား အပေါ် $$$ 5-4-17 များအတွက်အကြားအမြင်ရငွေခန့်မှန်းချက်ကမ္ဘာမြေလက္ခဏာများ (Taurus, Virgo, Capricorn) 5-11-17 မှ
အားလုံး 12 ရာသီခွင်လက္ခဏာများ "မေတ္တာ Karma" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းမွန်းကင်ဆာ4/ 30 / 17 1 ထည့်သွင်းခြင်း: 48am Pt.2
Megan ဧပြီလ 29, 2017aComment ချန်ထား 12am Pt.4: အားလုံး 30 ရာသီခွင်လက္ခဏာများ "မေတ္တာ Karma" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းမွန်းကင်ဆာ 17 / 1 / 482ထည့်သွင်းခြင်းအပေါ်
အားလုံး 12 ရာသီခွင်လက္ခဏာများ "မေတ္တာ Karma" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းမွန်းကင်ဆာ4/ 30 / 17 1 ထည့်သွင်းခြင်း: 48am
Megan ဧပြီလ 28, 2017aComment ချန်ထား 12am: အားလုံး4ရာသီခွင်လက္ခဏာများ "မေတ္တာ Karma" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းမွန်းကင်ဆာ 30 / 17 / 1 48 ထည့်သွင်းခြင်းအပေါ်
celebrity အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း: အ Conjuring "ဗိုလ်ချုပ်, မတ်ေတာ, ဝိညာဏစာဖတ်ခြင်း" မှ Vera Farmiga မင်းသမီး
Megan ဧပြီလ 28, 2017aComment ချန်ထား အဆိုပါ Conjuring "ဗိုလ်ချုပ်, မတ်ေတာ, ဝိညာဏစာဖတ်ခြင်း" မှ Vera Farmiga မင်းသမီး: Celebrity အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းအပေါ်
အာရုန်သည်ဟာနန်ဒက်ဇ်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း: တရားစွဲခံရသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား? tarotqueenjamila
Megan ဧပြီလ 28, 20173မှတ်ချက် အာရုန်သည်ဟာနန်ဒက်ဇ်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းအပေါ်: တရားစွဲခံရသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား? tarotqueenjamila
Virgo 2017 / 2016 များအတွက် "ဒီကညာ" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းနှစ်အလိုက် retroactive
Megan ဧပြီလ 20, 2017aComment ချန်ထား Virgo 2017 / 2016 များအတွက် "ဒီကညာ" အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းနှစ်အလိုက် retroactive အပေါ်
2017 /4/ 17 မှလေတပ်လက္ခဏာများ "မြင့်မြတ်သောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း 17"4/ 21 / 17 များအတွက်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း
Megan ဧပြီလ 19, 2017aComment ချန်ထား 2017 /4/ 17 မှလေတပ်လက္ခဏာများ "မြင့်မြတ်သောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း 17"4/ 21 / 17 များအတွက်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းအပေါ်
ကြှနျတေျာ့ကို PayPal ကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေရန် http://tarotqueenjamila.thedivinemommy.com/: ငါ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာစာဖတ်သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရန်: [အီးမေးလျ protected] အီးမေးလ်ပို့ရန်မေးခွန်းများ: [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ် (770) 686-7461 **************** လက်ရှိ Specials မခေါ် !!! ********************* [ ... ] များအတွက် $ 30 ********
ရေလက္ခဏာများ "မြင့်မြတ်သောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း 2017"4/ 17 / 17 မှ4/ 21 / 17 များအတွက်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်း
Megan ဧပြီလ 17, 2017aComment ချန်ထား 2017 /4/ 17 မှရေလက္ခဏာများ "မြင့်မြတ်သောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း 17"4/ 21 / 17 များအတွက်အကြားအမြင်ရစာဖတ်ခြင်းအပေါ်
အားလုံးလေတပ်လက္ခဏာတွေ: Saggitarius / Capricorn အကြားအမြင်ရခန့်မှန်းချက်များတွင်ကုံ, Libra, Gemini Weekend မွန်း
Megan ဧပြီလ 15, 2017aComment ချန်ထား Saggitarius / Capricorn အကြားအမြင်ရခန့်မှန်းချက်များတွင်ကုံ, Libra, Gemini Weekend မွန်း: အားလုံးလေတပ်လက္ခဏာတွေပေါ်